တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ဆောင်းပါးများ - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းမှု
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း & သုတ်ရည်လွှတ်ဆောင်းပါးများ
YBOP သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတားဆီးသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပါ။ ဒီ site ရဲ့နာမည်က“ မင်းရဲ့ ဦး နှောက် porn။ " ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁) ဒီမျိုးဆက်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်တူမရှိဟုရှုမြင်သည်။ လည်း တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင် (ယာယီ) ပပျောက်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဆင်ခြင်တုံတရားအရအသုံးပြုသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမှတ်စုများကိုခွဲထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားခဲ့သည်။ အောက်ပါအချက်အလက်သည်အရှက်ကွဲခြင်း (သို့) ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဘာမှမဖြစ်သော်လည်းမီဒီယာများကညံ့ဖျင်းသောကျန်းမာရေးပြောက်ကျားဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ အလယ်အလတ်တည်းဖြတ်ခြင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်နိုင်သည် - ၎င်းသည်ဘဝရှိအရာများအတွက်ဖြစ်သည်။
ယာယီ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်း (သို့) သင်၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြfromနာများမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။ YBOP အမြဲတမ်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အဖြစ် abstinence ထောက်ခံပါဘူး.
တစ်ကိုယ်တော် sex အကြောင်းငါးပါးလူကြိုက်များဒဏ္ဍာရီပြန်လည်စဉ်းစား
အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
သငျသညျလွန်း ejaculate တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ
ငါတို့နှင့်မတိမ်းယိမ်းမသွားသောလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်“ အသင့်အတင့်” ဟူသည်အဘယ်နည်း။
သင် (သို့မဟုတ်သင်၏ချစ်သူ) သည်လိင်ကစားစရာများ (သို့) အင်တာနက်ခေါ်ဆောင်သွားမှုများကိုသင့်တော်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ အဖြေသည်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ရှိသည် - ပြင်ပအကြံဥာဏ်၊ ဉာဏ်ပညာသို့မဟုတ်တရားသေအယူဝါဒများတွင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်၏ရှေးဟောင်းအစာစားချင်စိတ်ယန္တရား၊ သင်၏ဆုလာဘ်အခြေအနေ၏အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။
vibrators နှင့်“ Dead Vagina Syndrome” (သုတေသနနှင့်ပင်မသတင်းစာ)
တချို့က vibrator အသုံးပြုသူများကိုလိင်ကစားစရာသုံးရင်ပြီးနောက်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်တုံ့ပြန်အခက်အခဲအစီရင်ခံရသည်။
Kinsey / Trojan ၏တုန်ခါမှုကိုလေ့လာခြင်းသည်ချစ်သူများ၏ထိပ်တန်းမေးခွန်းကိုချန်လှပ်ထားသည်
Trojan သည်တုန်ခါရောင်းအားကိုမြှုပ်နှံထားသောဌာနတစ်ခုလုံးပါသောကုမ္ပဏီသည် Kinsey vibrator လေ့လာမှုကိုသာငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ချစ်သူများအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးမေးခွန်းကိုချန်လှပ်ထားသည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Fantasy နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော (ငါ)
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်normalုံပုံမှန်ပါပဲ။ ၎င်းသည်အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲသွားပြီးရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူများပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤဆောင်းပါးကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အတိတ်ကာလများ၌ပျံ့နှံ့မှုနည်းပါးသည်ဟုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကောင်းစွာကိုင်တွယ်ရန်မဖွံ့ဖြိုးသေးသောစိတ်ဖိစီးမှုများသောအခြေအနေများကြားတွင်မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးကုသရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်အော်ဂဇင်ကိုမရပ်မနားလိုက်လံရှာဖွေခြင်းဖြစ်နိုင်သလော။
လိုက်တယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများ (II ကို)
အဆိုပါတစ်ကိုယ်တော်-လိင်ကမ္ဘာကြီး Champs အဘယ်သူနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအပါအ ၀ င်အနောက်တိုင်းလိင်မှုပုံစံများသည်ယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူသောစံနှုန်းများဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ မနုropဗေဒပညာရှင်များသည်ဗဟိုအာဖရိကယဉ်ကျေးမှု ၂ ခု၏လိင်အပြုအမူကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဤနိဂုံးချုပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့သည်အာကာနှင့်နဂန္ဒူတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသတိမပြုမိကြောင်းသိရှိရ။ သူတို့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ သာမန်လူ့အပြုအမူများပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနောက်ခံအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ပါကပိုလျှံခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောပြanyနာများ၏အရင်းအမြစ်ကိုသိရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဤသည်အထက်ပါဆောင်းပါး၏ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်တွေအများကြီးဖုံးလွှမ်းထားသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုမည်သို့ ဦး တည်စေနိုင်သည်ကိုရှင်းပြသည်၊ ဒါ့အပြင်အချို့လူများကအော်ဂဇင်ပြီးနောက်“ hangover” ဘယ်လိုခံစားရသည်ကိုရှင်းပြသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ရုပ်ပုံများနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါမလိုလားအပ်သောသင်ယူမှုကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သောအလယ်အလတ်လမ်းကိုရှာဖွေရန်လာသည်။
သငျသညျမှုအနိမျ့သုက်ပိုးအရေအတွက်သို့မဟုတ် ED ဖို့ Gene ရေကူးကန်ထွက်ပါမည်ပါသလား?
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမြင့်မားမှုကသုက်ပိုးအရေအတွက်နည်းစေပြီးအခြေခံသို့ပြန်ရန်လပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ဘာမှမမှားပါ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များသည်ခေတ်သစ် WEIRD ၏နည်းတူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုကြိမ်နှုန်းကိုကြဉ်ရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်လျှော့ချခြင်းကာလပါ ၀ င်သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်းသည်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုအချို့ကစိုးရိမ်ကြသည်။ ဒီနေရာမှာရှုထောင့်အချို့။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး” (Jordan Green, SASH)
အမှတ်သုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေများနှင့်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်ကြားက (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) တစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုဖေါ်ပြခြင်းမျှမကယ့်ကိုအကောင်းရည်ရွယ်ချက်ဒေတာရှိပါတယ်။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး” (Jordan Green)
သငျသညျမှုအနိမျ့သုက်ပိုးအရေအတွက်သို့မဟုတ် ED ဖို့ Gene ရေကူးကန်ထွက်ပါမည်ပါသလား? (2011)
သုတ်ရည်လွှတ်: ဘယ်လိုမကြာခဏနျြးမာရေးကောငျးသလော (2010)
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Fantasy နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော (2010)
အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား? (2012)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (2012) ၏အံ့ဖွယ် Rethinking
တုန်ခါမှုနှင့်အခြားအပျြောအပါး: ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမအောင်မြင်မှုများရတဲ့အခါ (2011)
အမျိုးသမီးများ, တုန်ခါမှုနှင့်တုန်ယင်လိင်သုတေသန (2013)